အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:တာဝန်ခံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် တာဝန်ခံ ![ပြင်ဆင်ရန်]
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၆:၀၇၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားက ကြိုဆိုပါတယ်။ Talk:ဩစတြေးလျကျေးသန္တာ မှာ သင်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုမျိုး ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များရှိနေသော ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာများမှာ အကြောင်းအရာတွေ ထည့်သွင်းလိုက်တိုင်း ကျေးဇူးပြု၍ သင့်စာစုများကို လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါ။ (ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတွေ တည်းဖြတ်ရင်တော့ မလုပ်ရပါဘူး။) လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၁:၃၂၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
File:U Thittila.jpg ၏ ဖိုင်မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:U Thittila.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။ လက်ခံနိုင်သော လိုင်စင်အခြေအနေနှင့် ခိုင်မာသော ရင်းမြစ်ကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိပါက ဖိုင်သည် မကြာမီ ဖျက်ပစ်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဖိုင် အကြောင်းဖော်ပြချက် စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်ပြီး အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားတွင် မည်သည့်ဖိုင်များ တင်သင့်/မတင်သင့်ဆိုသည်ကို လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ပုံအသုံးပြုခြင်း မူဝါဒ ကို ဖတ်ရှုပါ။
သိရှိလိုသည့် မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ မီဒီယာ မူပိုင်ခွင့် မေးခွန်းများ စာမျက်နှာတွင် ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အတွက် ထပ်မံကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၀:၂၉၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
Appreciate your advice.The picture uploaded was grabbed fromareputable web page and so far, unable to gather the copyright of it, even tried communicating with web master of pertinent website. That website is usually meant for public information thus uploaded with no scruples. တာဝန်ခံ (ဆွေးနွေး) ၀၆:၄၀၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
ပုံမှန်အားဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေဟာ မူပိုင်ခွင့် ကင်းလွတ်တဲ့ အခမဲ့လိုင်စင်ပုံများ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် အခမဲ့ပုံ မရနိုင်တဲ့ အချို့အခြေအနေတွေမှာ (ကွယ်လွန်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ပုံ စသည်) တရားမျှတစွာ အသုံးပြုခြင်း မူဝါဒအရ မူပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ ပုံများကို အရွယ်အစားအသေးနဲ့ အချက်အလက်အပြည့်အစုံနဲ့ ချွင်းချက်အနေနဲ့ တင်လို့ရပါတယ်။ နောက်ပြီး မူပိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေကနေ ရယူထားတဲ့ ပုံ၊ မူပိုင်ခွင့် ဖော်ပြမထားတဲ့ ပုံတွေကို မူပိုင်ခွင့် ရှိပြီး လို့ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားက ယူဆပါတယ်။ တကယ်လို့များ အခု ပုံရယူထားတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ညွှန်ပြပေးနိုင်ရင် မူပိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ချက်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၇:၅၈၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
ကျေးဇူးပါ။ google - Images မှာ ရှာပြီး ရလာတဲ့ အဆက်ပါ။ oocities.org/ekchew.geo/paticca1.jpg တာဝန်ခံ (ဆွေးနွေး) ၀၂:၀၄၊ ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:တာဝန်ခံ&oldid=398362" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဧပြီ ၂၀၁၈၊ ၀၂:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။